ဟဒီးဆ်: သောကြာနေ့ အိမာမ်ခုသ်ဗဟ် မိန့်ခွန်းပြောနေစဉ် သင့်နံဘေးတွင်ရှိသော သူကိုဆိတ်ဆိတ်နေပါဟု အသင်ပြောဆိုလျှင် အမှန်တကယ် အသင်သည် အချည်းနှီးအပြုအမူတစ်ခုကို ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: သောကြာနေ့ အိမာမ်ခုသ်ဗဟ် မိန့်ခွန်းပြောနေစဉ် သင့်နံဘေးတွင်ရှိသော သူကိုဆိတ်ဆိတ်နေပါဟု အသင်ပြောဆိုလျှင် အမှန်တကယ် အသင်သည် အချည်းနှီးအပြုအမူတစ်ခုကို ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အမျိုးအစား: ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . ဆွလာသ်။ . ဂျုမုအဟ်ဆွလာသ်။ .
အဗူဟုရိုင်ရဟ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)ထံမှ ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ သောကြာနေ့ အိမာမ် ခုသ်ဗဟ် မိန့်ခွန်းပြောနေစဉ် သင့်နံဘေးတွင် ရှိသောသူကို ဆိတ်ဆိတ်နေပါဟု အသင်ပြောဆိုလျှင် အမှန်တကယ် အသင်သည် အချည်းနှီးအပြုအမူတစ်ခုကို ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ခွသ်ဗဟ်နှစ်ခုလုံးသည် ဂျုမုအဟ်၏ အကြီးမားဆုံးသော အထိမ်းအမှတ်များအနက်မှ ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များအနက်မှ တစ်ချက်မှာ လူတို့အားတရားဟောကြားခြင်း၊ ကောင်းရာညွှန်ကြားပြသခြင်း ဖြစ်သည်။ တရားနားထောင်သူလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများထဲတွင် တရားစကားများကို စဥ်းစားဆင်ခြင်နိုင်ရန်အတွက် တရားဟောကြားသူ၏ ခွသ်ဗဟ်နှစ်ခုလုံးကို တိတ်ဆိတ်စွာနားထောင်ရမည်။ ထို့ကြောင့် တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က အနည်းအကျဉ်းစကားမျိုးဖြစ်သည့် မိမိနံဘေးတွင်ရှိသူကို တားမြစ်သော “ဆိတ်ဆိတ်နေပါ” ဟူသည့်စကားမျိုးကိုပင် ပြောဆိုခြင်းမှ သတိပေးတားမြစ်ခဲ့သည်။ အကြင်သူသည် အိမာမ်က ခွသ်ဗဟ်တရားဟောကြားနေစဥ် စကားပြောသော် ထိုသူသည် အချည်းနှီး ပြုမှုခြင်းဖြစ်ပြီး ဂျုမုအဟ်၏ ထွတ်မြတ်မှုမှ လက်မဲ့ဖြစ်သွားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် မိမိကိုယ်တိုင်နှင့် အခြားသူအား ခွသ်ဗဟ်နားထောင်ခြင်းကို အနှောက်ယှက်ဖြစ်စေမည့် လုပ်ရပ်မျိုး ပြုလုပ်သည့်အတွက် ဖြစ်သည်။
ဂျုမုအဟ်နေ့တွင် ခွသ်ဗဟ်တရားဟောသူ၏ ဟောကြားမှုကို တိတ်ဆိတ်စွာနားထောင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ ဤအချက်အပေါ် သာသနာ့ပညာရှင်အားလုံးတညီတညွတ်တည်း ဖြစ်သည်။
ခွသ်ဗဟ်နားထောင်နေချိန်၌ စကားပြောခြင်းသည် ဟရာမ်ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာတွင် စကားပြောခြင်းကို တားမြစ်ထားသည် ဆိုသည်မှာ မကောင်းမှုမှတားမြစ်သည်ဖြစ်စေ၊ စလာမ်တုန့်ပြန်သည်ဖြစ်စေ၊ နှာချေသူအား အဖြေပေးသည်ဖြစ်စေ၊ အခြားသူအား စကားပြောရာရောက်သည့် ကိစ္စတိုင်းပါဝင်သည်။
ခွသ်ဗဟ်ချိန် ဆိတ်ဆိတ်နေရမည့် ပြဌာန်းချက်၌ အိမာမ်ကို စကားပြောသူနှင့် အိမာမ်က စကားပြန်ပြောသူတို့ မပါဝင်ပေ။
ခွသ်ဗဟ်ချိန် ဆိတ်ဆိတ်နေရမည့် ပြဌာန်းချက်၌ အချို့ပညာရှင်များက လူတစ်ဦးသည် ခွသ်ဗဟ်ဟောကြားသူ၏ အသံကို ဝေးသည့်အတွက် မကြားရပါက ဆိတ်ဆိတ်မနေဘဲ ကုရ်အာန်ဖတ်ခြင်း၊ ဇိကိရ်ပြုခြင်းတို့နှင့် မွေ့လျော်နေသင့်ကြောင်း ခြွင်းချက်အနေဖြင့် တင်ပြခဲ့ကြသည်။ အကြင်သူသည် နားမကြားသဖြင့် ခွသ်ဗဟ်အသံကို မကြားရပါက အသံကျယ်ကျယ်ရွတ်ဖတ်ခြင်းဖြင့် မိမိအနားတွင်ရှိနေသူတို့အား အနှောင့်ယှက်မဖြစ်စေရပေ။ မိမိတစ်ကိုယ်တည်း တီးတိုးစွာဖတ်ရမည်။
ခွသ်ဗဟ်အချိန်စကားပြောသူ၏ ပြစ်ဒဏ်မှာ ဂျုမုအဟ်၏ ထွတ်မြတ်မှုမှလက်မဲ့ ဖြစ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
အိမာမ်က ခွသ်ဗဟ်ဟောကြားနေစဉ် တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)၏ နာမတော်ပါလာသော် အသင်သည် တီးတိုးစွာ ဆွလာသ်မေတ္တာပို့သပါ။ ဤသို့ပြုခြင်းဖြင့် ကိုယ်တော်မြတ်၏ သြဝါဒတော်များကို ကျင့်သုံးရာလည်းရောက်သည်။ ထိုအတိုင်းပင် ဒုအာအတွက် အာမီးန်ဆိုရာတွင်လည်း တီးတိုးစွာဆိုရမည်။
ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဖိကဟ်။ . ဆွလာသ်။ . ဂျုမုအဟ်ဆွလာသ်။ .